रुँदा फाइदै हुन्छ – Health Post Nepal
रुँदा फाइदै हुन्छ
२०७७ मंसिर ५ गते १०:२८
रुनुलाई प्राय नकारात्मक भावमा लिइन्छ। मानिस दुःखी हुँदा धेरै रुन्छ अनि खुसीमा थोरै।
यहाँ रुनुका केही फाइदाहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ –
१. तनावलाई कम गर्छ
रोएपछि शरीरमा कोर्टीसोल नामक तनाव उत्पन्न गर्ने हर्माेन कम हुन्छ। कोर्टीसोलको फाइदा भएपनि यसले धेरै तनाव सृजना गर्दछ, जुन दिमाग र शरीरका लागि एकदम घातक हो।
रोएपछि तनाव घट्दछ। त्यसैले तनाव भएको समयमा तपाईं एक कुनामा गएर केहीबेर रुन सक्नुहुन्छ।
२. भावनात्मक पीडा मुक्त भइन्छ
शारीरिक पीडा भन्दा भावनात्मक पीडालाई सम्हाल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। शरीरको पीडालाई एउटा औषधी खाने बित्तिकै कम हुनसक्छ तर भावनामा ठेस पुगेपछि कसरी निको बनाउने? मनोचिकित्सकहरूले भावनात्मक पीडाका कारण डिप्रेशन हुने बताउँछन्। यसको सजिलो उपाय हो रुनु। यसले पीडालाई कम गर्दछ। वैज्ञानिकहरुले गरेको अध्ययनमा रोएपछि दिमागबाट न्युरोट्रान्समिटर निस्किन्छ जसले भावनात्कम पीडालाई कम गर्दछ।
३. हानिकारक ब्याक्टेरियालाई मारिदिन्छ
यो फाइदा सायदै कसैलाई थाहा होला। वैज्ञानिकहरुका अनुसार रुदाँ हानिकारक किटाणुहरुलाई मार्न मदत पु¥याउँछ। लाइसोजाइम नामक एक इन्जाइमसँग ब्याक्टेरिया मार्ने क्षमता हुन्छ। यसले १५ मिनेटमा व्याक्टेरिया मार्न सक्दछ। यो तत्व आँसुमा हुन्छ। लाइसोजाइमले एन्थ्राक्स हुने किटाणुलाई पनि मार्न सक्छ। त्यसैले अब देखि रुदाँ आँसु आउने गरी रुने र आँसु झर्दा मुखमा परे झनै राम्रो हुन्छ।
४.दृष्टिमा सुधार आउँछ
रुँदा दृष्टिमा सुधार आउँछ। आँशुले आँखाको नानीलाई सुख्खा हुन नदिई रसिलो बनाउँछ। डिहाइड्रेसन हुनबाट जोगाउँछ। डिहाइड्रेसनकै कारण आँखा कम देख्ने गर्दछ। आँशुले यो समस्यालाई सजिलै समाधान गर्दछ। आँखामा पसेको धुलोहरु पनि निकाल्न मदत गर्दछ। आँखामा भएको शलेष्म झिल्लीहरुलाई पनि हाइड्रेट गर्ने काम गर्दछ। पछि देखि आँखा चिलाउने, धमिलो देख्ने भयो भने रुन कोसिस गर्दा सजिलो हुन्छ।
५.रुनु नवजात शिशुको स्वास फेर्नुसँग सम्बन्धित हुन्छ
नवजात शिशुहरु धेरै रुन्छन्। रुँदा केही समस्या भएको होकी भनेर सोच्छौं। तर बालबालिकाहरुका लागि रुनु निकै फाइदाजनक हुन्छ। बच्चा जन्मने बित्तिकै रोएन भने उसलाई सास फेर्न समस्या भएको मानिन्छ। नवजात शिशु जन्मने बित्तिकै रुन्छन् जुन स्वभाविक नै होर यदि ऊ रोएन भने डाक्टरले रुवाउनका लागि खुट्टा समाएर बच्चालाई घोप्टो बनाउँछ भने कहिले पानीमा डुबाउने गर्दछ। गर्भनाल काटेपछि बच्चा रुनुपर्ने अत्यन्त जरुरी हुन्छ।
६. बच्चा सुत्नका लागि रुन्छन्
बच्चा रोएपछि अभिभावकहरु फकाउँछन् तर उनीहरु निदाउनका लागि पनि रुने गर्दछन्। आमाबुबाले बच्चालाई रुँदा फकाउँदै सुताउने तरीका सिक्नु जरुरी छ किनकी रोएपछि बच्चा लामो समयसम्म सुत्छ र बीचबीचमा पनि उठ्दैन।
७. राम्रो मुड बनाउँछ
रुँदा हाम्रो मुड राम्रो र फ्रेस हुन्छ। यसले डिप्रेसन र एन्जाइटी जस्ता रोगहरुलाई पनि कम गर्न मदत गर्दछ। रुँदा चिसो हावा स्वासबाट फेरिन्छ जसले गर्दा दिमागको तापक्रमलाई मिलाउँछ।
८. रोगसँग लड्ने क्षमतालाई सुधार गर्दछ
अनुसन्धानले रुदाँ रोगसँग लड्नसक्ने क्षमतालाई बढाउँछ। यसको फाइदा छालाको एलर्जीबाट जोगाउँछ।
९.आँशुमा ज्यादा मात्रामा इलेक्ट्रोलाइट हुन्छ
आँशुमा इलेक्ट्रोलाइट र प्रोटिनको मात्रा धेरै हुन्छ जुन शरीरलाई एकदमै फाइदा पुर्‍याउँछ। यसमा भएको विभिन्न खालका तत्वहरुले शरीरमा भएको किटाणुहरु मार्ने काम गर्दछ। आँशु मुखमा परे झने फाइदाजनक हुन्छ।